Emechara Emechara Bike Road na Istanbul Street | RayHaber
HomeTurkeyBlack Sea Region81 Duzce TurkeyEmechara Bullcle Road dị na Street Street
11 / 11 / 2019 81 Duzce Turkey, General, Black Sea Region, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
Emegheri Street Street maka ọrụ igwe kwụ otu ebe
Ọrụ Bike n'okporo ụzọ dị na Istanbul Street mepere; Ọrụ a na-arụ n'okporo ụzọ ịnyịnya ígwè, nke a na-arụ kemgbe, agwụla. Mgbe usoro eserese ahụ na mwepụ nke ihe mgbochi metal n'akụkụ nke okporo ụzọ ahụ, emegheere ụmụ amaala ahụ ụzọ keke. Okwuru maka ojiji nke ndị ji ụkwụ aga njem karịa karịa ndị na-agba ịnyịnya nke ụzọ igwe kwụ otu ebe.
Atụmatụ Düzce ogologo oge etinyela n'ụzọ ịnyịnya ígwè, mepere maka iji taa. Ndị na-agba igwe kwụ otu ebe bidoro jiri ụzọ mepere emepe site na iwepu ihe mgbochi nke igwe mgbe eserese. Akụkọ na-eduga Ìgwè ahụ jụrụ ụmụ amaala nke ụzọ ahụ mepere emepe. Ndị mmadụ juru afọ ụzọ keke, ebe ndị na-agba ịnyịnya na-ekwu mere mkpesa na ndị na-aga ije na-ejikarị ụzọ ahụ.
Citizensmụ amaala afọ ojuju na emepe emepe igwe
Oldu iwepụ ihe mgbochi ahụ dị mma nke ukwuu ” Obi dị m ụtọ na igwe kwụ otu ebe emepere. Iwepu ihe mgbochi dị ezigbo mma. Thedị ụgbọ ala a dịbu ebe a abaghị uru ọ bụla. Ndị anyị ejighị tram. N’efu, enwere ego site na ịme ụgbọ ala. Ọ ka mma ịnweta ụzọ igwe kwụ otu ebe. Ndị na-agba ụkwụ na-eji ụzọ igwe kwụ otu ebe n'ihi na ọ warara n'okporo ụzọ. Ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na okporo ụzọ dị warara. Mana ekwesighi iji ya. Ọ ka mma ma ọ bụrụ na mmadụ niile na-agbaso ụzọ nke ha. Enwere ọtụtụ anyịnya igwe na Düzce. Anyị kwesịrị iji nke anyịnya igwe.
"Mara mma na mbubreyo ngwa" Ọ gafeela ime otú ahụ. Mana naanị nsogbu dị ebe a bụ na ụgbọala ndị ahụ ekwesịghị ịhapụ ebe a na-adọba ụgbọala. A na-amanye bọs ndị ime obodo ịgafe n'okporo ụzọ. Ha na enwe nsogbu ime ka ndị mmadụ daa. Citizensmụ amaala nwere nkwarụ na-enwe nsogbu ịpụ ụgbọ ala. Ezigbo echiche nke ụzọ igwe kwụ otu ebe iche. Onye isi obodo Mayor Faruk Özlü chere nke ọma site na iwepu ebe a na-adọba ụgbọala ebe a. Ejiri ụkwụ anyị. Ọ ka mma ugbu a. Ngwa mbubreyo. Ndị na-agba ụkwụ na-eji ụzọ igwe kwụ otu ebe bụ n'ihi oghere dị warara. Mgbe ụzọ ịgba ịnyịnya dị obere obosara dị warara, ụmụ amaala na-eji ụzọ keke ma ha ekwesịghị iji ya.
“Ọ dị m ka ya bụrụ na e mechiri emechi emechi” Openedzọ ahụ meghere emechi. Tupu ebupu tram ya ugbu a ọ bụ ụzọ igwe kwụ otu ebe. Ọ dị m ka ya mechiri emechi mgbe niile. Ọ kaara m mma imechi ụzọ. Mgbe emechiri okporo ụzọ, ndị mmadụ na-aga ije dịka ha chọrọ. Ugbu a, ha nwere ụmụ ha ebe niile.
“Ebe a abụghị njem hiree” Obi dị m ụtọ na a rụrụ okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe. Eji m igwe m na-agba, ma ndị mmadụ na-abịa n'ihu m. Achọrọ m ka ndị mmadụ kpachara anya. Onye obula kwesiri iji uzo nke ya. Mgbe ndị mmadụ wụliri n'ihu anyị, anyị ga-abụ ndị ikpe mara. Ihe a abụghị ije. Obodo a wuru ebe a maka ndị na - agba ịnyịnya.
“Achọrọ m ka ndị ji ụkwụ agafe ụzọ ụkwụ ' Enwere m obi ụtọ na ụzọ igwe kwụ otu ebe. Achọrọ m ka ndị ji ụkwụ agafe ụzọ. Ha na ụzọ ha. Mgbe anyị ghasịrị nkụ, ihe omume na-apụta. Ọ na - abụkarị ndị na - agba n'okporo ụzọ. Mgbe anyị kụrụ anyị ihe, anyị bụ ndị ikpe mara. Anyị chọrọ ka ọ lezie anya karịa ndị ji ụkwụ aga.
“Ndị mmadụ na-eweso anyị iwe” Ndị mmadụ na-agba ịnyịnya ígwè adịghị ama ama. Ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji eji anyị iwe. Otu nwanyị wesara anyị iwe ugbu a na ha pụta. Citizensmụ amaala na-agba n'okporo ụzọ ahụ. Nke a abụghị ụzọ egwuregwu, ọ bụ ụzọ igwe kwụ otu ebe. Anyị chọrọ ka ndị mmadụ kwanyere ndị na-agba anyịnya igwe.
Emeghachitela ụdị ọhụụ ahụ na Başiskele İstiklal Street
A na-amalite Iju Mmiri na Istiklal Street
Ọganihu na-ebili na okporo ụzọ Konya Aziziye
Nkeji nke abụọ iji malite na Salim Dervişoğlu Street
Ọhụụ Ọhụụ na Ụzọ Ọhụụ Ọhụrụ na Uluyol Street
Ngalaba nke abụọ iji wuchaa Street Street
2 na Salim Dervişoğlu Street. E mechara nkeji
Mmụba n'okporo ụzọ na Nusret Çetinkaya Street…
Na-arụ ọrụ na Salim Dervişoğlu Street Full Throttle
Mobile wuru na Salim Dervişoğlu Street…
Ọnọdụ Nostalgic na okporo ụzọ Istanbul…
Ntughari nke ugbo ala nke onwe na Muğla Transport…
Ọrụ Ntanarị 5 Million 220 Thousand TL Nkwado
Emepeala okporo ụzọ okporo ụzọ ụgbọ ala Istanbul Street